Torolalana fampianarana ny olom-pirenena manerantany te-hamoaka vaovao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Janoary 2008 15:07 GMT
Amim-piravoravoana no ilazan’ny Rising Voices ny boky voalohany amin’ny andiana torolalana hanazava amin’ny mpamaky tsy maharaka ny teknika ny fahalalana fototra momba ny Olom-pirenena mamoaka vaovao (na fantsom-baovaon’olom-pirenena).
Ny torolalana voalohany, An Introduction to Citizen Media, (fampidirana ho amin’ny fantsom-baovaon’olom-pirenena) no maneho ny trangam-piainana andavanandron’olotsotra manerantany tsy mitsahamitombo noho ny fampiasana bolongana an-tsoratra, am-peo, an-dahatsary ary an-tsary voakaly ka mifanantona hiresaka tsy misy mpanelanelana tsy voasakan’ny halavirana, kolontsaina ary ny fahasamihafam-pitenenana. Ao amin’ny teny fampidirana:
Just ten years ago we all learned about the world around us from newspapers, the television, and radio. Professional journalists would go to faraway places and bring back stories, photographs and videos of the situations they witnessed and the people they met.Sometimes at dinner we talk about these stories with our friends and family. But ten years ago we rarely, if ever, communicated directly with the journalists themselves. Leading members of society wrote editorials expressing their opinions about various issues, but the rest of us could only share our opinions and thoughts with a small group of friends.
Ny fomba fampitantsika no ivombesatry ny fiovana.
Vao folo taona lasa izay dia tamin’ny alalan’ny gazety, fahitalavitra ary fandefasam-peo no ahafantarantsika rehetra ny momba an’izao tontolo izao manodidina antsika. Ny mpanao gazety matihanina no mandeha any amin’ny toerana lavitra indrindra vitany ary mivatsy ny tantara, ny sary ary ny lahatsary hitany sy ny olona nifanena tafaresaka taminy.Eo ampisakafoanana isika indraindray no miresaka amin’ny namana sy ny fianakaviana ireny tantara ireny. Saingy tamin’izany folo taona lasa izany dia tena ankavitsiana no niresahantsika mivantana tamin’ireny mpanao gazety ireny. Ny Olobe eo amin’ny fiaraha-monina no nanoratra ny matoandahatsoratra ilazany ny heviny amin’ny lohahevitra samihafa, fa isika ambiny kosa dia ireo namantsika vitsivitsy ihany no mba hifampizarantsika ny hevitsika sy izay eritreritsika.Saingy niova izany taona vitsivitsy lasa izay. Isaorantsika ny fitaovana vaovao toy ny weblogs (nogasiako hoe bolongana), ankehitriny manko dia tsotra ny fampielezana amin’ny alalan’ny aterineto. Hatrany Torkia, any Kenya ka hatrany Bolivia, olotsotra tahaka ahy sy ianao izao no manomboka mizara ny tantarany sy ny heviny amin’izao tontolo izao.
Raha azon’ny olon-drehetra atao eo ampelatanany ity fomba fifaneraserana vaovao ity, dia ho maro hatrany ny olona hodidinin’ny manan-karena (pahasoavana ?) anivon-tanàndehibe.
Ny tanjon’ity torolalana ity dia ny hilaza fa izay rehetra afaka mifandray amin’ny aterineto dia afaka mandray anjara amin’ny resaka misongadina manerantany. Tsy ny gazety sy ny fahitalavitra ihany no hamolavola ny toe-tsaintsika manomboka izao fa isika samy isika no hifanabe.
Vonona amin’ny teny anglisy, espaniola ary Bengali aloha izao ity An Introduction to Citizen Media ity fa mbola ho avy koa ny amin’ny teny Swahili, Malagasy, ary Aymara.
Na dia efa maro aza ny teny fampidirana tena tsara amin’ny fitsipika ankapoben’ny fantsom-baovaon’olom-pirenena, dia saiky mitongilana hampisongadina ny fampiroboroboana ny fandraisan’ny olom-pirenena ny any Amerika avaratra sy Eoropa andrefana ihany izany. Antenaina kosa ity torolalana ity, etsy ankilan’izany, haneho amin’ny mpamaky any Amerika Avaratra sy Eoropa fa maro koa ny zavabaovao sy zava-mahaliana mifandraika amin’ny fantsom-baovaon’olom-pirenena mitranga any amin’ny faritra ivelan’ny tontolo tandrefana. Kendrena ihany koa izy ity ho antotam-baovao ampiasain’ny fantsom-baovaon’olom-pirenena te-hiakatra amin’ny sehatra avo kokoa (iraisam-pirenena) amin’ny fanatanterahana ny tetikasany rehefa hanatona ny mpitondra, mpanao politika ary amin’ny malala-tanana (izany tokoa moa ny fondation ?)ry zareo.
Mandritra ny taona 2008 dia hamoaka tsy tapaka sy hampiely ny torolalana voazava amin’ny antsipiriany kokoa amin’ny fampiasana ny fahana RSS, ny bolongana, ny famoahan-tsary (voakaly), ny fandefasam-peo, ary ny fandefasan-tsary online (amin’ny aterineto) ny Rising Voices.